कांग्रेस र एमालेका आसन्न महाधिवेशनः नीतिको आवरणमा नेतामुखी बन्ने अभ्यास « Nepal Bahas
गुट चलाउने मनोवृत्ति बढ्दै
कांग्रेस र एमालेका आसन्न महाधिवेशनः नीतिको आवरणमा नेतामुखी बन्ने अभ्यास
प्रकाशित मिति : ८ मंसिर २०७८, बुधबार १९:१०
नेपालको सबैभन्दा पुरानो र प्रजातन्त्र प्राप्तिका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै आएको नेपाली कांग्रेस र कम्युनिष्ट राजनीतिको मुख्य घटक तर पछिल्लो समयमा विभाजनबाट रन्थनिएको दल एमालेले यही मंसिरमा महाधिवेशन गर्दैछन् । नेपालको राजनीतिका नेतृत्वदायी दल कांग्रेस र एमाले प्रतिस्पर्धी दल पनि हुन् ।
यी दलका महाधिवेशन हुँदै गर्दा राजनीतिको रंगमञ्चमा केही परिदृश्यहरु देखिए, देखिँदै छन्, यिनले नेपालको भावी राजनीतिलाई कता डोर्याउने होलान् ? केही प्रश्न उब्जाएको छ, विश्लेषककाबीच चासोको विषय बन्न पुगेको छ ।
मंसिर दोस्रो साताभित्र सकिने एमालेको महाधिवेशनलाई वश्लेषण गरौं । एमाले महाधिवेशनका क्रममा स्थानीय तहका वडा स्तरीयसम्मै सदस्यता नवीकरण, नयाँ सदस्यता वितरण तथा पदाधिकारी चयन गर्यो । एमाले तल्लोतहका जनस्तरसम्म पुग्यो तर निर्वाचन नगराएर अधिकांश स्थानमा प्रतिनिधि सर्वसम्मत रुपमा चयन गरेको बताइयो ।
यो क्रम स्थानीय तह, प्रदेश तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि छनोटमा पनि चल्यो । केन्द्रमा पनि सर्वसम्मतिबाट केन्द्रीय पदाधिकारी छान्ने भन्ने ओलीको चाहना पूरा गर्ने भरमग्दुर प्रयास गरिँदैछ । हुन त ओलीविरुद्ध भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरिसकेका छन् । यसलाई कुन रुपमा लिइने हो, भन्न सकिन्न । एमाले केन्द्रीय सस्य खगराज अधिकारीले ओलीको टक्कर लिन खोज्नु देशद्रोही हो भनेका छन् । नेता महेश बस्नेतले चेतावनीको भाषामा अहिले अध्यक्षमा ओलीको विकल्प छैन, भीम रावलले उम्मेदवारी दिएर राम्रो गर्नुभएन भनिदिए । अध्यक्षबाहेक अरु पदमा नेताहरुको ठूलो पंक्तिमा खट्पटी, चाहना देखिन्छ तर ओली र उनको वरिपरिको जबर्जस्त नेता, कार्यकर्ताको बलियो घेराका सामू कसैले पनि सजिलैसँग उम्मेदवारी दिन सक्ने अवस्था छैन ।
संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको इतर पक्षको आरोप थियो । गुटगत प्रतिस्पर्धा भए पनि केही चलखेल, शक्ति प्रदर्शन भए पनि अधिवेशन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै भएको देखिन्छ । अहिले नयाँ युवाहरुको आकर्षण र छनोट दुवै उल्लेख्य छ । कतिपय कांग्रेसमा जीवन बिताएका, पार्टी संगठनमा ठूलो योगदान गरेका नेताहरुलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट राकियो, हराइयो ।
राजनीतिमा देखिएको यस्तो देख्नका लागि आवरणमा सबै सहमतिमा, सबै हार्दिकतामा तलदेखि माथिसम्म पदाधिकारी छनोट गरियो भनेर गदगद हुने तर मनोवैज्ञानिक रुपमै प्रतिपर्धा गर्नबाट रोक्ने अवस्था अत्यन्तै खतरनाक हो । तैंले हामीविरुद्ध उम्मेदवारी दिने ? भनेर दाह्रा किट्ने अवस्था निषेधको राजनीति हो । यो लोकतन्त्रका लागि बाधक छ । हुन त एमालेले विधान महाधिवेशन गरेर नीतिलाई विशेष महत्व दिन्छ भन्ने सन्देश दिन खोज्यो तर अध्यक्ष र उनका वरिपरिका केही नेताको बल चल्ने वातावरण बनाउँदै जानु, आवश्यक परे यही तप्काले जति बेला पनि विधान संशोधन गर्ने अवस्था बनाइनु कसरी लोकतान्त्रिक प्रक्रिया तथा पद्धतिभित्र पर्छ ?
अब सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका गतिविधिलाई नियालौं । कांग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको क्रममा स्थानीय तहसम्म प्रतिनिधि तथा पदाधिकारी छान्दै अब प्रदेशमा आउँदै छ । केन्द्रको राजनीतिक सरगर्मी पनि बढ्दै गएको छ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा जुनसुकै तहमा पनि गुटगत प्रतिस्पर्धा देखियो । हुन त पहिलेदेखि नै साधारण सदस्यता विवाद चलिरहेकै थियो । संस्थापन पक्षले एकलौटी गरेको इतर पक्षको आरोप थियो । गुटगत प्रतिस्पर्धा भए पनि केही चलखेल, शक्ति प्रदर्शन भए पनि अधिवेशन प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै भएको देखिन्छ । अहिले नयाँ युवाहरुको आकर्षण र छनोट दुवै उल्लेख्य छ । कतिपय कांग्रेसमा जीवन बिताएका, पार्टी संगठनमा ठूलो योगदान गरेका नेताहरुलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नबाट राकियो, हराइयो । गुटको सबैभन्दा नराम्रो परिणाम यसमा देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई अप्ठ्यारो परेका बेला बोक्ने खम्बा कमजोर हुने खतरा बढेको छ ।
केन्द्रको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबै नेताले सभापतिको उम्मेदवारको हैसियतमा देख्ने, अरुलाई कमजोर देख्ने, सिद्धान्तको कुनै मतलव नगर्ने तर आफू पूर्ण सक्षम भएको ठान्ने मनोविज्ञान नेताहरुमा देखिन्छ । यसले सिद्धान्त र त्यस अनुसारको भविष्यको दिशा निर्देशको आधारमा गुट नभएर व्यक्तिको आधारमा गुट चलाउने मनोवृत्ति बढ्दै जाने स्पष्ट देखिएको छ । अधा दर्जनभन्दा बढी सभापतिका दाबेदार हुनु त्यसैको उदाहरण हो । अन्य पदहरुमा पनि यस्तै अवस्था देखिन्छ ।
प्रजातान्त्रिक पार्टी कार्यकर्ता तथा नेताले कुनै पनि पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक हक हो तर आफूलाई हदभन्दा ठूलो ठान्नु खतरा हो । निर्वाचन हुनेसँग नीतिगत विशेषता नहुनु, भविषयको दिशा निर्देश गर्ने गर्ने योजना नहुनु तर जुनसुकै कार्यमा पनि हारेका प्रतिस्पर्धीका लागि भागबन्डा गर्नुपर्ने अवस्था लोकतन्त्रका लागि ऐजेरु हो । कांग्रेसमा देखिएको यो अवस्थाले कांग्रेसलाई भविष्यको दह्रो र सशक्त पार्टी हुनबाट रोक्छ । यसले त पार्टी ठूलो छ, तल्लो तहसम्म पुगेको छ तर जनताको भरोसायोग्य बन्न कठिन छ । यी दुवै पार्टीका अहिलेका राजनीतिक परिदृश्यले बलियो लोकतन्त्र वा प्रजातन्त्रको गतिलाई अघि बढाउन बाधा पुर्याउने नै देखिन्छ । हेरौ भविष्यमा कसरी बहस विश्लषण हुन्छ ?
भेषराज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थराजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरु लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।